Xalka Laser - Laser Dahab ah
In geeddi-soo-saarka ee dharka saxaafadda filter, maro ciidda, bacaha siigada, maro mesh filter, guluubyada filter, dhogorta polyester filter, suuf filter iyo filter filter, goldenlaser jebiyey dhalo ah ee wax filter filter, goynta, goynta iyo hababka kale ee dhaqanka. .
Talinayo Laser Systems
Nalalka iyo Qalabka Ilaalinta
Ka faa'iideysiga mashiinka goynta laser-ka ee ay soo saartay goldenlaser, waxaa suurtagal ah in si hufan loo soo saaro alaabada inta badan dhammaan dharka farsamada iyo walxaha isku dhafan ee kuleylka iyo warshadaha ilaalinta.
Farsamaynta leysarka CO2 (goynta leysarka, calaamadeynta laser-ka iyo daloolinta laser-ka ee lagu daro) waxay u fureysaa fursado badan oo loogu talagalay codsiyada gudaha iyo dibedda ee wax soo saarka baabuurta. Goynta laser goynta saxda ah iyo kuwa aan la xiriirin waxay ka kooban tahay heer sare oo otomaatig ah iyo dabacsanaan aan la qiyaasi karin.
Dharka ku faafidda hawada ayaa runtii ah xalka ugu fiican ee hawo qaadashada. Goldenlaser ayaa si gaar ah loogu talagalay mashiinada leysarka CO2 ee fuliya goynta saxda ah iyo daloolinta marinnada hawo-qaadashada dharka ee laga sameeyay dharka qaaska ah.
Warqadaha Sandaqada & Saxannada Gogosha La Goynayo
Laserku waa xal kale oo loogu talagalay ka shaqeynta warqada ciida si loo fuliyo dalabaadka cusub ee ka baaraandegista saxannada saxarada xoqan, kuwaas oo ka baxsan helitaanka dhimista dhaqanka. Ikhtiyaar macquul ah oo lagu soo saari karo godad yar yar oo ku yaal warqadda ciida waa in la isticmaalo nidaamka leysarka CO2 Galvo laser.
Warshadaha Daabacaadda Sublimation
Mashiinka Goynta Laser-ka ee 'Goldenlaser' wuxuu masaxayaa nidaamka jarista dharka daabacan si dhakhso leh oo sax ah, wuxuu si otomaatig ah u magdhabayaa wixii dhalanrog iyo fiditaanno ka dhaca duubabka aan xasilloonayn ee dharka.
Nidaamka goynta laser-ka ee calaamadda 'Goldenlaser' waa mid u gaar ah dhammaystirka calaamadda, waa teknoolojiyad goynta leysku-dhex-dhexaad ah oo beddela shaqooyinka gaagaaban iyo kuwa dhexdhexaadka ah oo si kalsooni leh oo hufan u socda, awoodna u leh in ay ka shaqeeyaan geedi socodka shaqada oo dhan si dijitaal ah.
Warshadaha hargaha & kabaha
Xalka laserlas & maqaarka laser laser, oo ku qalabaysan nidaamka xakamaynta dhaqdhaqaaqa saxda ah ee sare, iskudhafka qaab dijitaalka ah, qiimeynta iyo buulka caqliga leh iyo shaqooyinka kale oo ay weheliso tikniyoolajiyadda laser ee aan la midka ahayn si loogu beddelo qalab goynta caadiga ah ...
Dharka Dharka Warshadaha
Xalalka warshadaha harqaanka dharka ee Goldenlaser ayaa inta badan loo sameeyay wax soo saar dufcadood oo yar, hal goyn iyo dawaarid, tolmo maro muunad ah, iyo xawaare sare oo loo sameeyay-si loo qiyaaso dharka dharka ...
Goynta iyo feerka ee barkinta shilka, nidaamka goynta laser-ka dahabka ee Goldenlaser wuxuu leeyahay faa iidooyin muuqda marka la barbar dhigo nidaamka dhimista-farsamada dhimista Waxsoosaarka laser-ka wuxuu adeegsadaa habka waxsoosaarka kuleylka. Ma jiro wax isdaba marin ah oo ku saabsan maaddada.
Warshadaha Dharka Guriga
In warshadaha dharka guriga, xal goldlaser ayaa sannado ka mid ah faa'iidooyinka. Goldenlaser si gaar ah loogu talagalay qaab-ballaaran-xawaaraha sare mashiinka goynta & xardho. Waxay sameyn kartaa goynta dharka dharka dharka iyo muraayadda muraayada goynta iyo feerka ..
Marabtaa inaad waxbadan ogaato? Nagala soo xiriir qiimeyn!
GOLDEN LASER waxay siisaa xalka laser-ka noocyo kala duwan oo warshado codsi ah.
Meel Banaan Buuxi Hoos